ကိုယ်ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့ Celebrity Crush နဲ့ လက်ထပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်များ
ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ အနုပညာကို ရူးသွပ်သူတွေအတွက်တော့ ကိုယ်စွဲစွဲမြဲမြဲကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ Celebrity Crush တွေဆိုတာ ရှိကြမှာပါ။ သူတို့ပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ၊ သီချင်းတွေကြည့်ရင်း၊ နားထောင်ရင်း စားလည်းဒီစိတ်၊ သွားလည်းဒီစိတ်နဲ့ အတွေးတွေထဲမှာ စိုးမိုးမိတဲ့အထိ ရူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့မဆိုထားနဲ့ အပြင်မှာ မြင်ရုံလေးနဲ့တင် အံ့သြဝမ်းသာဖြစ်ပြီး ပျော်ရလွန်းတဲ့ခံစားချက်ကို Celebrity တွေကို တမ်းတမ်းစွဲ Crush ကြတဲ့သူတိုင်း ကောင်းကောင်း နားလည်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီ Celebrity တွေကတော့ ထီဆုကြီးကြီးပေါက်တာထက် ပိုပျော်ရမယ့် ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ အကြောင်းကတော့ သူတို့ရူးသွပ်ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ Celebrity Crush တွေနဲ့ တွေ့ဆုံချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ရလို့ပါပဲ။ ဘယ်သူတွေများ ဘဝမှာ အပျော်ဆုံးလူသားတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါလိမ့်?
(၁) Kanye West နဲ့ Kim Kardashian
Hollywood ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးစုံတွဲဖြစ်တဲ့ West နဲ့ Kim တို့ စုံတွဲကတော့ ဒီနေ့ဒီလို အရှိန်အဝါကြီးတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နေကြတာ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်ပေမယ့် တော်တော်များများမသိကြသေးတာက West ဟာ 2000 ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ Kim နဲ့ Paris Hilton တူတူတွဲရိုက်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံကိုမြင်ပြီးတည်းက Kim ကို အသည်းအသန်ကြွေခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့အချိန် Kim ရဲ့ ဒုတိယအမျိုးသား Kris Humphries ရှိနေတာမို့ West အတွက် အခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး။ Kim အပေါ် စွဲလမ်းလွန်းခဲ့တဲ့ West ဟာ အဲ့အချိန်အခါကာလမှာတောင် ဖုန်းတစ်လုံးကို ပထမဆုံး မရမကဝယ်ပြီး Kim နဲ့ စကားပြောဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲ့ကနေ ချစ်ဇာတ်လမ်းစခဲ့တဲ့ သူတို့ ၂ဦးသားဟာ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလမှာ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ထိ ချစ်ကြိုးတွေခိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခုဆိုရင်တော့ North နဲ့ Saint ဆိုတဲ့ ကလေး ၂ယောက်တောင် ရနေပြီတဲ့။
Kanye West နဲ့ Kim Kardashian
(၂) Matt Damon နဲ့ Luciana Damon
Lociana Barroso ဆိုတာက 2002 ခုနှစ်တုန်းကတော့ Miama Bar ရဲ့ Bartender မလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် Matt Damon နာမည်ကြီးနေချိန်ကာလတွေမှာ ပျိုတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့သူ့ကို တစ်ခါတည်း ညို့ယူဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာကတော့ သာမန် Bartender ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာအံ့သြစရာပါပဲ။ Miama Bar မှာ “Stuck on You” ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလာရိုက်ကူးတဲ့ Matt ဟာ အဲ့ဒီအချိန် “လူတွေကြားထဲမှာ သူမတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ မျက်လုံးထဲမြင်တော့ပါတယ်” လို့ Ellen DeGeneres Show မှာ ဖွင့်ဟဝန်ခံပါတယ်။ “ကလေးလေးယောက်နဲ့ ၈နှစ်ကျော်သက်တမ်းအချစ်တစ်ခုဟာ အဲ့ကိစ္စတွေသာမဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ဘဝဆိုပြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး” တဲ့။ Matt ကို သဘောကျခဲ့တဲ့ Luciana ကတော့ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခံရလို့ ကံအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Matt Damon နဲ့ Luciana Damon
(၃) Nicolas Cage နဲ့ Alice Kim
Face Off ဇာတ်ကားရဲ့ မင်းသားကြီး Nicolas Cage ကတော့ သူ့ဖူးစာရှင်ကို Kabuki လို့ ခေါ်တဲ့ Los Angeles Restaurant တစ်ခုမှာ စားသောက်နေရင်းတွေ့ခဲ့တာပါ။ Kim ဟာ Nicolas ရဲ့ အမာခံပရိသတ်ဖြစ်ပြီး အဲ့အချိန်တုန်းကတော့ Waitress မလေးပေါ့။ အဲ့အချိန် Kim ရဲ့ အလှကို ကြွေခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီးက သူ ” Lord of War” ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမယ့် တောင်အာဖရိကကို တူတူလိုက်ခဲ့ဖို့ထိပါ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ၂လ အကြာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့စုံတွဲကတော့ ၂၀၁၆ ထိ ၁၁ နှစ်ကြာအတူတူပေါင်းသင်းခဲ့ကြပါတယ်။
Nicolas Cage နဲ့ Alice Kim
(၄) Prince William and Kate Middleton
ဒီတော်ဝင်မောင်နှံစုံတွဲရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကြည်နူးစရာလေးပါပဲ။ Kate ဟာ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် Wiltshire မှာရှိတဲ့ Marlborough College မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတုန်းက သူမအိမ်က အိပ်ခန်းထဲမှာ Prince William ရဲ့ ပုံတွေ နံရံမှာကပ်ထားခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေကြာလို့ တက္ကသိုလ်တက်ချိန်ကျမှ Kate ဟာ သူမရဲ့ Crush ဖြစ်ခဲ့သူ Prince William နဲ့ Scotland မှာရှိတဲ့ St.Andrew တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားရင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တော်တော်ကြာ သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြပြီး အဲ့ဒီသံယောဇဉ်ကြိုးလေးကိုတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲပြီး ချည်နှောင်ရစ်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
(၅) Cash Warren နဲ့ Jessica Alba
Jessica ကတော့ Fantastic Four ဇာတ်ကားနဲ့ 2014 ခုနှစ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေတချီကြီးသိမ်းပိုက်နေချိန်မှာပဲ သူမကိုဝိုင်းဝိုင်းလည်ကြွေနေသူတွေကြားက Production Assistant ဖြစ်သူ Cash Warren အပေါ် ချစ်သဒ္ဓါစိတ်တွေ ယိုဖိတ်ခဲ့ပါသတဲ့။ Cash က စကြွေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အချိန်တော်တော်ကြာ စွဲလမ်းခဲ့ပြီးမှ ရိုက်ကွင်းအချိန်တစ်ခုမှာ ရင်းနှီးခဲ့ကြပြီး ၄ နှစ်အကြာ LA မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါသတဲ့။
Wiz Khalifa နဲ့ Amber Rose
(၆) Wiz Khalifa နဲ့ Amber Rose
သူတို့ ၂ဦးကတော့ 2013 မှာ လက်ထပ်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး လက်မထပ်ခင်မှာရော၊ စတင် Date မလုပ်ခင်မှာပါ Wiz အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ Amber ကို ကြွေခဲ့လဲဆိုတာ ဖုံးမနိုင်ဖိမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ Amber ကတော့ Wiz နဲ့ Twitter မှာ စတင်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Wiz အကြောင်းအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့လုတစ်ယောက်က “တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ မင်းနဲ့အတူရှိချင်ဆုံး အမျိုးသမီးက ဘယ်သူများလဲ” ဆိုတော့ မဆိုင်းမတွဘဲ “Amber Rose” လို့ ဖြေခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ Interview ကို Amber မြင်ပြီးနောက် ပြန် ဝေမျှခဲ့ပြီး Twitter မှာပဲ “ချစ်စရာကောင်းတယ်” လို့ ပြန်ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေစပြီး လက်ထပ်လိုက်ကြပါလေရောတဲ့။
(၇) Tom Cruise နဲ့ Katie Holmes
Tom Cruise ရဲ့ ဇနီးဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူ Katie ကတော့ သူမ ငယ်ငယ်လေးတည်းက Tom အပေါ် စွဲလန်းလွန်းတာများ သူမရဲ့ ဖတ်စာအုပ်တွေထဲမှာ Tom ရဲ့ ပုံတွေ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ထိပါပဲ။ Tom နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ရတဲ့နေ့ဟာ သူမဘဝရဲ့ အိပ်မက်တွေအားလုံး ဖြစ်လာသလိုပါပဲဆိုပြီး ဝမ်းအသာဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ကိုယ်ငယ်စဉ်တည်းက ကြွေရ၊ ရူးသွပ်ရတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ လက်ထပ်ခွင့်ရတဲ့ သူတို့ကတော့ အချိန်တော်တော်ကြာ ခွာမပြဲကြခင်အထိတော့ ကံအကောင်းဆုံးလူသားတွေဖြစ်ခဲ့ကြမှာပါ။
ကိုယျရူးသှပျခဲ့တဲ့ Celebrity Crush နဲ့ လကျထပျနိုငျခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောမြား
ရုပျရှငျကားတှနေဲ့ အနုပညာကို ရူးသှပျသူတှအေတှကျတော့ ကိုယျစှဲစှဲမွဲမွဲကွိုကျနှဈသကျခဲ့ရတဲ့ Celebrity Crush တှဆေိုတာ ရှိကွမှာပါ။ သူတို့ပါတဲ့ ရုပျရှငျကားတှေ၊ သီခငျြးတှကွေညျ့ရငျး၊ နားထောငျရငျး စားလညျးဒီစိတျ၊ သှားလညျးဒီစိတျနဲ့ အတှေးတှထေဲမှာ စိုးမိုးမိတဲ့အထိ ရူးသှပျခဲ့ရတဲ့သူတှကေို ပိုငျဆိုငျဖို့မဆိုထားနဲ့ အပွငျမှာ မွငျရုံလေးနဲ့တငျ အံ့သွဝမျးသာဖွဈပွီး ပြျောရလှနျးတဲ့ခံစားခကျြကို Celebrity တှကေို တမျးတမျးစှဲ Crush ကွတဲ့သူတိုငျး ကောငျးကောငျး နားလညျမှာပါ။
ဒါပမေယျ့ ဒီ Celebrity တှကေတော့ ထီဆုကွီးကွီးပေါကျတာထကျ ပိုပြျောရမယျ့ ဘဝကိုပိုငျဆိုငျခဲ့ကွပါတယျတဲ့။ အကွောငျးကတော့ သူတို့ရူးသှပျရတဲ့ သူတို့ရဲ့ Celebrity Crush တှနေဲ့ တှဆေုံ့ခဈြကြှမျးဝငျပွီး လကျထပျခဲ့ရလို့ပါပဲ။ ဘယျသူတှမြေား ဘဝမှာ အပြျောဆုံးလူသားတှဖွေဈခဲ့ကွပါလိမျ့?
(၁) Kanye West နဲ့ Kim Kardashian
Hollywood ရဲ့ နာမညျအကွီးဆုံးစုံတှဲဖွဈတဲ့ West နဲ့ Kim တို့ စုံတှဲကတော့ ဒီနဒေီ့လို အရှိနျအဝါကွီးတဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျနကွေတာ လူတိုငျးသိပွီးဖွဈပမေယျ့ တျောတျောမြားမြားမသိကွသေးတာက West ဟာ 2000 ခုနှဈအစောပိုငျးမှာ Kim နဲ့ Paris Hilton တူတူတှဲရိုကျခဲ့တဲ့ဓါတျပုံကိုမွငျပွီးတညျးက Kim ကို အသညျးအသနျကွှခေဲ့ရတာပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့အခြိနျ Kim ရဲ့ ဒုတိယအမြိုးသား Kris Humphries ရှိနတောမို့ West အတှကျ အခှငျ့မသာခဲ့ပါဘူး။ Kim အပျေါ စှဲလမျးလှနျးခဲ့တဲ့ West ဟာ အဲ့အခြိနျအခါကာလမှာတောငျ ဖုနျးတဈလုံးကို ပထမဆုံး မရမကဝယျပွီး Kim နဲ့ စကားပွောဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျတဲ့။ အဲ့ကနေ ခဈြဇာတျလမျးစခဲ့တဲ့ သူတို့ ၂ဦးသားဟာ၂၀၁၄ ခုနှဈ မလေမှာ လကျထပျခဲ့တဲ့ထိ ခဈြကွိုးတှခေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ခုဆိုရငျတော့ North နဲ့ Saint ဆိုတဲ့ ကလေး ၂ယောကျတောငျ ရနပွေီတဲ့။
(၂) Matt Damon နဲ့ Luciana Damon
Lociana Barroso ဆိုတာက 2002 ခုနှဈတုနျးကတော့ Miama Bar ရဲ့ Bartender မလေးတဈယောကျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ Matt Damon နာမညျကွီးနခြေိနျကာလတှမှော ပြိုတိုငျးကွိုကျကွတဲ့သူ့ကို တဈခါတညျး ညို့ယူဖမျးစားနိုငျခဲ့တာကတော့ သာမနျ Bartender ကောငျမလေးတဈယောကျဖွဈနတောအံ့သွစရာပါပဲ။ Miama Bar မှာ “Stuck on You” ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးလာရိုကျကူးတဲ့ Matt ဟာ အဲ့ဒီအခြိနျ “လူတှကွေားထဲမှာ သူမတဈယောကျတညျးကိုပဲ မကျြလုံးထဲမွငျတော့ပါတယျ” လို့ Ellen DeGeneres Show မှာ ဖှငျ့ဟဝနျခံပါတယျ။ “ကလေးလေးယောကျနဲ့ ၈နှဈကြျောသကျတမျးအခဈြတဈခုဟာ အဲ့ကိစ်စတှသောမဖွဈခဲ့ရငျ ဒီနေ့ ကြှနျတေျာ့ဘဝဆိုပွီးဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး” တဲ့။ Matt ကို သဘောကခြဲ့တဲ့ Luciana ကတော့ သညျးသညျးလှုပျခဈြခံရလို့ ကံအကောငျးဆုံးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Matt Damon နဲ့ Luciana Damon
(၃) Nicolas Cage နဲ့ Alice Kim
Face Off ဇာတျကားရဲ့ မငျးသားကွီး Nicolas Cage ကတော့ သူ့ဖူးစာရှငျကို Kabuki လို့ ချေါတဲ့ Los Angeles Restaurant တဈခုမှာ စားသောကျနရေငျးတှခေဲ့တာပါ။ Kim ဟာ Nicolas ရဲ့ အမာခံပရိသတျဖွဈပွီး အဲ့အခြိနျတုနျးကတော့ Waitress မလေးပေါ့။ အဲ့အခြိနျ Kim ရဲ့ အလှကို ကွှခေဲ့တဲ့ မငျးသားကွီးက သူ ” Lord of War” ရုပျရှငျရိုကျကူးမယျ့ တောငျအာဖရိကကို တူတူလိုကျခဲ့ဖို့ထိပါ ဖိတျချေါပွီး ၂လ အကွာ လကျထပျခဲ့ကွပါတယျ။ သူတို့စုံတှဲကတော့ ၂၀၁၆ ထိ ၁၁ နှဈကွာအတူတူပေါငျးသငျးခဲ့ကွပါတယျ။
Nicolas Cage နဲ့ Alice Kim
ဒီတျောဝငျမောငျနှံစုံတှဲရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးကတော့ ကွညျနူးစရာလေးပါပဲ။ Kate ဟာ အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျ Wiltshire မှာရှိတဲ့ Marlborough College မှာ ပညာသငျကွားခဲ့ရတုနျးက သူမအိမျက အိပျခနျးထဲမှာ Prince William ရဲ့ ပုံတှေ နံရံမှာကပျထားခဲ့တယျလို့ သတငျးတှထှေကျခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးနှဈတှကွောလို့ တက်ကသိုလျတကျခြိနျကမြှ Kate ဟာ သူမရဲ့ Crush ဖွဈခဲ့သူ Prince William နဲ့ Scotland မှာရှိတဲ့ St.Andrew တက်ကသိုလျမှာ ပညာသငျကွားရငျးတှခေဲ့ပါတယျ။ အခြိနျတျောတျောကွာ သူငယျခငျြးဖွဈခဲ့ကွပွီး အဲ့ဒီသံယောဇဉျကွိုးလေးကိုတော့ ၂၀၁၁ ခုနှဈမှာ မင်ျဂလာလကျထပျပှဲဆငျနှဲပွီး ခညျြနှောငျရဈပတျခဲ့ပါတယျ။
(၅) Cash Warren နဲ့ Jessica Alba
Jessica ကတော့ Fantastic Four ဇာတျကားနဲ့ 2014 ခုနှဈမှာ အောငျမွငျမှုတှတေခြီကွီးသိမျးပိုကျနခြေိနျမှာပဲ သူမကိုဝိုငျးဝိုငျးလညျကွှနေသေူတှကွေားက Production Assistant ဖွဈသူ Cash Warren အပျေါ ခဈြသဒ်ဓါစိတျတှေ ယိုဖိတျခဲ့ပါသတဲ့။ Cash က စကွှခေဲ့တာဖွဈပွီး အခြိနျတျောတျောကွာ စှဲလမျးခဲ့ပွီးမှ ရိုကျကှငျးအခြိနျတဈခုမှာ ရငျးနှီးခဲ့ကွပွီး ၄ နှဈအကွာ LA မှာ လကျထပျခဲ့ကွပါသတဲ့။
Wiz Khalifa နဲ့ Amber Rose
(၆) Wiz Khalifa နဲ့ Amber Rose
သူတို့ ၂ဦးကတော့ 2013 မှာ လကျထပျခဲ့သူတှဖွေဈပွီး လကျမထပျခငျမှာရော၊ စတငျ Date မလုပျခငျမှာပါ Wiz အနနေဲ့ ဘယျလောကျထိ Amber ကို ကွှခေဲ့လဲဆိုတာ ဖုံးမနိုငျဖိမရဖွဈခဲ့ပါတယျတဲ့။ Amber ကတော့ Wiz နဲ့ Twitter မှာ စတငျတှခေဲ့တာဖွဈပွီး Wiz အကွောငျးအငျတာဗြူးလုပျတဲ့လုတဈယောကျက “တဈကမ်ဘာလုံးမှာ မငျးနဲ့အတူရှိခငျြဆုံး အမြိုးသမီးက ဘယျသူမြားလဲ” ဆိုတော့ မဆိုငျးမတှဘဲ “Amber Rose” လို့ ဖွခေဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ Interview ကို Amber မွငျပွီးနောကျ ပွနျ ဝမြှေခဲ့ပွီး Twitter မှာပဲ “ခဈြစရာကောငျးတယျ” လို့ ပွနျရေးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျမှာ ခဈြဇာတျလမျးလေးတှစေပွီး လကျထပျလိုကျကွပါလရေောတဲ့။
(၇) Tom Cruise နဲ့ Katie Holmes
Tom Cruise ရဲ့ ဇနီးဟောငျးဖွဈခဲ့သူ Katie ကတော့ သူမ ငယျငယျလေးတညျးက Tom အပျေါ စှဲလနျးလှနျးတာမြား သူမရဲ့ ဖတျစာအုပျတှထေဲမှာ Tom ရဲ့ ပုံတှေ သိမျးထားခဲ့တဲ့ထိပါပဲ။ Tom နဲ့ လကျထပျခဲ့ရတဲ့နဟေ့ာ သူမဘဝရဲ့ အိပျမကျတှအေားလုံး ဖွဈလာသလိုပါပဲဆိုပွီး ဝမျးအသာဆုံးမိနျးကလေးဖွဈခဲ့ပါတယျတဲ့။
ကိုယျငယျစဉျတညျးက ကွှရေ၊ ရူးသှပျရတဲ့ မငျးသားမငျးသမီးတှနေဲ့ လကျထပျခှငျ့ရတဲ့ သူတို့ကတော့ အခြိနျတျောတျောကွာ ခှာမပွဲကွခငျအထိတော့ ကံအကောငျးဆုံးလူသားတှဖွေဈခဲ့ကွမှာပါ။